Gareth Bale Oo Doonaya In Oo Dib Ugu Laabto Real Madrid Hadii Zidane Laga Raacdeeyo
Home Horyaalka Spain Gareth Bale oo doonaya in oo dib ugu laabto Real Madrid hadii...
Xiddiga garabka ka ciyaara ee reer Wales Gareth Bale ayaa isha ku haya mustaqbalka tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane, kaasoo bixitaankiisu albaabka u furi doono inuu xilli ciyaareedkiisii ​​ugu dambeeyay ku qaato Santiago Bernabeu.
Bale ayaa gabi ahaanba ka lumiyey booskii oo ku lahaa Real, isagoo kaliya ciyaaray 12 kulan oo La Liga ah xilli ciyaareedkiisii ​​ugu dambeeyay, waxaana amaah loogu diray xagaagan kooxdiisii hore Tottenham, iyadoo kooxda Jose Mourinho ay bixisay 50% mushaharkiisii ​​badnaa.
Waxay u muuqatay inay dhamaatay Bale Madrid, laakiin sida laga soo xigtay AS, ciyaaryahanka reer Wales ma diidi doono inuu dib ugu laabto Real sanadkiisii ​​ugu dambeeyay si uu isugu dayo inuu isku muujiyo oo uu dib ugu dhiso sumcadiisa Spain.
Taasi waxay u badan tahay inay suurtogal tahay kaliya haddii Zidane baxo. Tababaraha reer France ayaa in badan doorbidayay ciyaartoyda kale booska Bale waxaana hubaal ah inuu sii wadi doono isbedelkaas, laakiin albaabka ayaa dib loo furi karaa hadii uu Zidane ka tago kooxda.
Shaqada Zidane ayaa loo maleynayay inay qarka u saarneyd markii Real ay wajahday Borussia Monchengladbach horaantii bishii Diseembar, iyadoo Los Blancos ay wajaheyso ka reebitaan Champions League, laakiin guushii 2-0 iyo wixii ka dambeeyay 2-0 ee ay ka gaareen Atletico Madrid ayaa culeyska ka yareeyay Zidane .
Qeyb weyn oo ka mid ah fekerka Bale ayaa ah hubin la’aantiisa ku aadan in Spurs ay diyaar u tahay inay amaahdiisa joogto ka dhigato. Waxa uu saftay kaliya seddex kulan Premier League xilli ciyaareedkan, labo ka mid ah bedel ayuu ahaa, waxaana jira wacyigelin uu u baahan yahay inuu saameyn weyn ku yeesho si uu uga dhaadhiciyo Spurs inay ogolaato heshiis amaah kale ama uu mushaarkiisa si joogto ah u qaato.
Previous articleLiverpool oo u muuqata kooxda ugu cadcad inay la soo wareegto daafaca Inter Milan
Next articleAabaha Messi wuxuu meesha ka saaray wararka sheegaya in Messe wada hadal la furay Paris Saint-Germain